Gingde blọgụ maka azụmahịa | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị nọghị na Webtrends Gbanye na ogbako 2010, Agbaghara ihe ịrịba azụmahịa azụmahịa ogbako. Njikọ adịghị ka ọgbakọ ụlọ ọrụ ọ bụla m gara. Ebumnuche bụ iji nye ndị ahịa na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ohere ịnweta ụfọdụ ndị ọkachamara kachasị mma na ndị na-egbuke egbuke na ụlọ ọrụ ịntanetị niile. Debanye aha maka afọ ọzọ Soro na San Francisco - ha na-ere mgbe niile!
N'afọ a, a kpọrọ m ka m mee Sprint, akara ngosi 10 nkeji banyere ihe ịre ahịa n'ịntanetị metụtara yana na m nwere mmasị na ya. Ekpebiri m ime nke m inbound marketing (pịa ma ọ bụrụ na ịhụghị ngosi). Na New Orleans, ekwuru m okwu banyere azụmahịa maka ịre ahịa azụmaahịa, mana usoro kachasị mma metụtara azụmaahịa na ịzụ ahịa ndị ahịa.
Ihe ngosi izizi dịtụ iche ebe ọ bụ na ọ dị anim ma maaakwa mma gafee ihu ihu 80 n’azụ m… mana nke a bụ anụ ya!
N'ezie, ọ bụrụ na ịnọ na New Orleans, ị nwetara ezigbo ọgwụgwọ… emere m okwu m ma jiri Social Media tụnyere mgbanwe nke ịgba egwu. Ọbụna atụbara m nzọụkwụ abụọ ma chịa ọchị. Ọ bụ oge dị mma gburugburu!
Nke a bụ nchịkọta nke ọdịnaya nke slides:
Atụmatụ Inbound Marketing
Ikwenye ọdịnaya bụ ihe na-eme mgbanwe. Nnukwu ọdịnaya bụ ngwakọta nke ojiji isiokwu dị irè na ọdịnaya nke na-aza ndị ọbịa ajụjụ? ma gbaa ha ume ka ha nweta usoro ọzọ na usoro ahịa. Gị blog kachasị maka ọchụchọ ọchụchọ.
Laa azụ n'ụbọchị, Ahịa na Ahịa bụ isi mmalite nke ozi maka atụmanya. Atụmanya dabere na ha.
Ugbu a, Search Enjini na-enyekarị ozi ndị atụmanya na-achọ.
Mgbasa mgbasa ozi na-emetụta ma nyocha ma na-emetụta onye na-eme mkpebi. Olileanya a na-enweta ozi ugbu a site na Nchọgharị Nchọpụta na site na Social Network ha.
Y’oburu na ndi ahia gi na ndi ahia gha etinye aka na mkpebi nke olile anya a, ha kwesiri iduga na ọchụchọ ma sonye na netwọkụ mmekọrịta. Agaghị enwe ụlọ ọrụ naanị ichere ka ị nwee atụmanya? Bịakwute ha?.
Kwesịrị ịnọ ebe niile!
Iji syndication na ngwa ọrụ ndị ọzọ nwere ike ịchekwa oge ma debe gị n'ihu ebe ị kwesịrị ịnọ!
Na mgbakwunye, enwere ngwaọrụ ndị ọzọ dị n'ahịa iji mee ka njikọta njikọ gị dị mfe.
Ọ bụla blog post kwesịrị inwe ụzọ ntinye aka. Dịka, nke a bụ oku ime ihe, na peeji ọdịda, na ntughari!
Onye ahịa ahụ dabara na post blọgụ gị, wee hụ oku dị mkpa iji mee ihe. Ọkpụkpọ oku ahụ ga - eduga ha na peeji ọdịda ma banye na ntughari ntụgharị.
Ọtụtụ ndị anaghị agụ. Ntughari: Otutu ndi mmadu adighi? Jiri oke ocha di nma, gosiputa onyonyo ma gbakwunye vidiyo na odi. Na-azụ uche: visual, na-anụ ahụ, na-eme ka ahụ sie ike.
Nbudata, ihe omume, Ajụjụ na Azịza, ozi ịntanetị, akwụkwọ akụkọ White, Nrite?. Nhọrọ ndị a niile kwesịrị ịchọ ụdị data iji nakọta ozi ndu. Gị blog bụ free? zụọ ihe ọ bụla maka data!
Wulite peeji nke na-adọrọ adọrọ nke na-ewe obere data ma na-ebute ụzọ. Mee ka ọ dị mfe. Nke a bụ ezigbo ihe atụ si Ngwakọta.
Tụọ otú ndu gị si erute? site na syndication, soshal midia, akwụkwọ ozi email, ihe omume, wdg. Nke a ga-enye gị ohere ịchọpụta ebe ị kwesịrị itinye oge kachasị!
Ekiri na-ezo ngalaba, setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ, na nyochaa gị akakabarede funnels!
M? Douglas Karr (Twitter: @onyedikachi_), Ọ bụrụ na ị chọrọ enyemaka, kpọtụrụ m na DK New Media.
Oh ... na m nwere ike tinye na m meghere na a kediegwu duba si Indianapolis ka New Orleans banyere Super nnukwu efere. Ọ baghị uru ikwu na amụma m dara ebe ọ bụla na nkeji iri na anọ na ndị Senti na-agwa m ya n'abalị Sọnde!
Tags: ịde blọgụ maka azụmahịaịde blọgụ maka seoụlọ ọrụ ịde blọgụtinye akainbound marketingAwebtrends itinye aka